Iri ndiro bhokisi rekutakura iro Apple raigona kusanganisira mune yayo Apple Watch | Ndinobva mac
Zvekare zvakare tinotaura nezve diki pane yemhuri yeApple, iyo Apple Watch. Sezvo yekutanga Apple Watch ini ndaigara ndichifunga kuti Apple yaifanirwa kunge yaifunga zvirinani zvine chekuita nekupakata mune iyo wachi inouya uye pamusoro pezvese kugona kuimutsiridza pasina kutambura kukuvara kubva kudonha uye ndizvozvo inongounza mukati mebhokisi tambo yekuchaja induction.
Ini ndawana akawanda ekuchaja machira uye makesi epamhepo izvo zvandatokuudza nezvazvo pane dzimwe nguva zhinji, asi panguva ino ndawana chigadzirwa chakachipa uye pamusoro pacho zvinoita sekuti Apple pachayo Ndingadai ndakavafungidzira iwo magumo ainayo.
Iyo yekufamba kana yekufambisa kesi umo matinogona kutsvaga zvinhu zvitatu izvo zvatinoda kunakirwa nazvo Apple Watch, iyo wachi pachayo, chaja, mune ino kesi American vhezheni uye induction yekuchaja tambo. Hazvisi pachena kwandiri kuti charger yeEuropean inopinda mukamuri repazasi remhosva iyi, asi zvimwe zvese zvaizobatsira munyika medu.
Iyo kesi inogadzirwa neyepepuru chena epurasitiki sebhokisi repurasitiki iro rakaverengerwa mune yekutanga Apple Watch Sport uye yakajeka yeplastiki chivharo. Iyo nzira yekushandisa iri nyore uye isu tinongofanirwa kutsvaga induction yekuchaja tambo mukati uye tobva tatsvaga iyo Apple Watch iyo, sezvazviri pasi pechivharo chakajeka, isu tichaona nguva dzese mune mamiriro emubhadharo, kusanganisira iyo nguva kana tikachiisa mune yemubhedha tafura modhi.
Muchikamu chezasi, sekuratidzira kwataita, isu tine kamuri umo tingawana tip yeiyo induction yekuchaja tambo mukuwedzera kune iyo adapta. Mutengo wacho ndewe 5,59 euros uye iwe unogona kuiwana mu next link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iri ndiro bhokisi rekutakura iro Apple raigona kusanganisira mune yayo Apple Watch